Iminqweno engama-150 yemidlalo yevidiyo ekusenokwenzeka ukuba ubungayazi | Iindaba zeGajethi
Iividiyo ezili-150 zomdlalo wevidiyo mhlawumbi ongazi
Akukho bambalwa iimbekiselo o Amaqanda eIsta ukuba badwelisi benkqubo imidlalo yevidiyo ngabom bafaka ngaphakathi kweetayitile zabo ukumangaliswa ngabadlala umdlalo, njengokuzinikezela okanye ukuqhwanyaza kweminye imisebenzi -njengabadlali, iimuvi, uthotho okanye eminye imidlalo yevidiyo-.
Oko kungathethi ngamanye amaninzi zodwa Ukuzalwa ngengozi okanye ukubonakala kweminye imiba okanye ukukhula kwezihloko ezithile. Namhlanje siza kukunika 150 ezingaqhelekanga ngokuqinisekileyo iya kubandakanya ezinye obungazazi. Ukuba niyadlala kwaye niyathanda ukwazi, siyakumema ukuba uhlale kwaye ufunde uluhlu esilwenzile ukuba silufundele MundiVideogames.
1. Imephu edlalwayo ye- "GTA: San Andreas" iphantse ibe yi-44 yeekhilomitha. Ngamaxesha ama-5 ubukhulu beSixeko soKhuseleko, kunye namaxesha ama-4 kubungakanani beVice City.
2. Umdlalo "Ratchet & Bolt" urhoxisiwe nge-Megadrive 32X, ibinomphathi wokugqibela obekwi-30 screens ephezulu kwaye ephethe malunga nezixhobo ezingama-33.
Kwimidyarho yamaChihuahuas "Isandla sikaThixo", kukho inja ebizwa ngokuba yiNtloko kaM_ikami (iNtloko kaMikami), ibizwa ngegama lokuhlonipha isicatshulwa esivela kumdali "Wendawo yokuhlala engendawo": "Phambi kokuba ndiphulukane nentloko kunokuba ndibone" Umhlali Evil 3 'ported to the PS4'.
Amanqaku aphezulu kumdlalo we "Pac-Man" ngamanqaku angama-4. Banhlanu kuphela abantu abaphumeleleyo.
5. Isaga ye-Oddworld5 inezihloko ezininzi ezingapapashwanga, "Isandla sikaOdd", "iSqueek's Oddysee" kunye "neSligStorm".
6. Umdlalo weSega Space "iChannel 5" wayenomlo osemthethweni noLady Miss Kier, owayelilungu likaDeee-Lite, malunga nokufana phakathi kwakhe nomlinganiswa ophambili womdlalo, Ulala. U-Miss Kier ulahlekile.
7. Imveliso yokuqala eyayithengiswa nguSony yayingumpheki wokupheka irayisi.
8. Umdlalo we-robotic action wePS2, "Armored Core Nine Breaker", unendlela yoqeqesho lwezifundo ezili-150.
9. Owona mdlalo we-weo weird we-cameo kufuneka ukuba ube "ngu-Alien Hominid" obonakala kwisiqendu se "The Sopranos."
10. Kwi "RPG Metal Saga" kwiPS2 (khange ikhutshwe eYurophu, isasazwa e-USA ngu-Atlus) ungafikelela kwesinye seziphelo ezisuka kwintshayelelo.
11. Kwi-arcade yase "Donkey Kong" yasekuqaleni, uMario ubizwa ngokuba nguJumpman kwaye ungumchweli, hayi itywina.
12. Inani elinemivo emi-6 linokufundwa kwiiTanki zeScorpion kwi "Halo", eli nani ngumhla wokuzalwa komlawuli wezobugcisa bomdlalo, uMarcus R. Lehto. Iimpawu zakhe zokuqala zikwavela kuphela kwizihlangu zeNkosi eyiNtloko.
13. Iqanda lokuqala lePasika elifunyenwe kumdlalo wevidiyo lithathwa ngokuba lalikwi "Adventure" ngeAtary 2600, kwaye yayiqulathe igumbi apho igama lomdali womdlalo lalinokubonwa khona.
14. Umntu wokuqala ukudubula, »iDoom 3 ″, iqulethe isalathiso, esifunyenwe kwi 'ingame' PDA, kwihlaya laseBritane 'iOfisi'.
15. UGuy Cihi, odlala indawo kaJames Sunderland kwi "Silent Hill 2," ngumtyalomali osengozini enkulu owaphoswa ngelixa wayehamba nentombi yakhe ukuya kwenza omnye umdlalo.
Kukho izixhobo ezingama-16 kwezixhobo "Final Fantasy X".
7. UMichael Jackson, ngandlela thile, uvele kwi "Sonic the Hedgehog 3", "Ready 2 Rumble Round 2", "Space Channel" 5,1 and 2, "GTA: Vice City" kwaye, ngokucacileyo, kwi "Moonwalker" ».
18. Emva ngo-1995, uNintendo wathi ngaphezulu kwe-100 izihloko zomntu wesithathu zaziphuhliswa okwangoku kungekenziwa i-Virtual Boy.
19. "Wonke umntu uyamthanda uKamatari" iqulethe inqanaba lebhonasi eliqukethe ukuqokelela iiroses ezizigidi. Ngethamsanqa, akufuneki igqitywe kube kanye.
20. "I-FIFA 2001" yayiyeyokuqala kwaye kuphela (mhlawumbi akunjalo, kuthiwa ngowokuqala "uGran Turismo" naye) ukusebenzisa ii-CD zokukrwela nokukrwela. I-CD holia ingca.
21. "Intsomi: Izahluko Ezilahlekileyo" iqulethe ingcwaba likaPeter Molyneux.
22. "I-Red Dead Revolver" ekuqaleni yayiyinkqubela phambili yeCapcom, kodwa yathengisa amalungelo kwiRockstar.
23. Umdlalo "Umdlalo weGuy" wePS2 kunye neXbox, kwafuneka urhoxiswe xa kwafunyaniswa ukuba enye yamantombazana yayingaphantsi xa umdlalo upapashwa.
24. "Halo 2" yeyona Xbox ithengiswa kakhulu, ithengise into efana nezigidi ezisi-8. Olona khuphiswano lwalo ngqo yeyona "Halo" yokuqala, enezigidi ezi-5.
25. Kwi "Elder Scrolls III: Morrowind", kukho ibhungane elithethayo lifihlwe kwisiqithi esincinci, esikwangumthengisi.
26. 'ICO' lisuselwa kwigama lesiJapan elithi 'masihambe'.
27. Kwi "Animal Crossing" kwiNintendo 64, engashiyanga iJapan, kuye kwafuneka ukuba ufake umhla kunye nexesha ngalinye uqala umdlalo.
28. Umongameli weNintendo yaseMelika, uReggie Fils-Aime, ngaphambili wayengumlawuli omkhulu kwezentengiso zesizwe ePizza Hut. Ngelixa yayikhona, yasungula iBigfoot Pizza kunye neBig New Yorker.
29. I-squat braniac iRaz ibingahlali ingoyena mntu uphambili kwii "Psychonauts." Ekuqaleni, kwakuyinciniba.
30. Ngaphambi kokwenza iiklasikhi ezinkulu ezinje nge "Outrun", "Shenmue" kunye ne "Virtua Fighter" kaSega, u-Yu Suzuki wayefuna ukuba ngugqirha wamazinyo.
31. Umlinganiswa ophambili we "Tomb Raider", uLara Croft, ekuqaleni wayezakuthiwa nguLaura Cruz.
32. UNintendo akazange anike uMario ifani, nangona "uMario Bros." (Abantakwabo Mario) bacebisa ukuba yi-MARIO.
33. Umdlalo wePS2 "Asterix & Obelix XXL 2" uqulethe ngaphezulu kwe-100 yeeparodi zabalinganiswa / izihloko ezivela kweminye imidlalo yevidiyo, kubandakanya "iPac-man", "iTomb Raider", "iTetris", "Street Fighter" okanye "Super Mario" Ilanga ».
34. Igama lekhowudi ngexesha lokuphuhliswa kwe- "Half-Life" yayingu-Quiver (Quiver), ukuhlonipha isiseko somkhosi wase-Arrowhead kwinoveli kaStephen King, "Inkungu."
35. Umdlalo wokuqala we "Dynasty Warriors" wawubethwa ubuso ngobuso.
36. "IGran Turismo 2" ibineemoto ezimalunga nama-650, "uGran Turismo 3" khange ayenze.
37. Ngokuka 'Umbutho woLonwabo weSoftware', umdlali ophakathi e-USA uneminyaka engama-33, kwaye ebedlala malunga ne-12 (yintoni ubungendawo)
38. Umongameli weNintendo uHiroshi Yamauchi ungumnini wenani elikhulu kwiqela le-baseball laseSeattle, ngoku likhokelwa yinkokheli yeNintendo yaseMelika uHoward Linciln.
39. Keita Takahashi, umlawuli we Katamari imidlalo, ucaphula uPicasso kunye ne "Little Shop of Horror" njengenxalenye yenkuthazo yakhe.
40. Kumanqanaba okuqala ophuhliso lwe "Final Fantasy XII", bekukho izicwangciso zokuvumela umdlali wesibini ukuba ajoyine umdlalo.
41. Ngo-2001, abafundi abambalwa benza inguqulelo yePong, ebizwa ngokuba yi-'Painstation ', eyathi yabetha kanobom, yatsha okanye yatshitshisa ngombane kwabo boyisiweyo.
42. UDavid Hayter, ilizwi leNyoka eQinisekileyo kwi saga "ye-Metal Gear Solid", wabhala umdlalo weqonga "we-X-men".
43. Phantse isiqingatha sediski yendawo ye- "Elder Scrolls IV: Oblivion" ziingxoxo.
44. Xa kwakhutshwa i-GTA yokuqala (e-E3 '97), ababekho baxelelwa ukuba kuya kuthatha malunga nemizuzu emi-3 ukuqhuba ukusuka kwelinye icala lomdlalo wesixeko ukuya kwelinye.
45. Kwinqanaba elinye lomkhankaso womdlali we "Halo 2, Metropolis", ibhola ekhatywayo inokufunyanwa ifihlwe eluphahleni.
46. ​​Phambi kokuchaza u-'Simlish 'njengento engaqondakaliyo, abadali bazame iilwimi ezinje ngesiUkraine, isiNavajo okanye isiTagalog (kwiiPhilippines) (Ngaba uBill Bright ngokwakhe wayekhe wathi isekwe kwisiNavajo)
47. Iyonke imidlalo engama-57 ekhutshiweyo yeNokia NGage.
48. Isihloko esithi "Pikmin" siwonga inja kaShigeru Miyamoto.
49. I-Sega's «Outrun · ivele kwiifomathi ezili-19.
50. Umdlalo we "Animal Crossing" kwiGamecube unokufikelela kwi-29 yeminyaka eyiyo, ngokunokwenzeka.
51. Amabele kaLara Croft sisiphumo somyili Toby Gard ngempazamo ehlengahlengisa isifuba semodeli ukuya kwi-150% yobukhulu awayebukhangela, kwaye ecengwa ngabanye abayili ukuba bayishiye injalo.
52. E-Japan, "Imbono kaJoe" yePS2 ibinesihloko esithi, "Ithemba elitsha," ngembeko yesiQendu IV se-Star Wars.
53. Ijoni elithile ku "God of War" likhupha i "Wilhelm Scream", isandi sesitokhwe, esisetyenzisiweyo kwiTV nakwiimuvi ngaphezulu kweminyaka engama-50. Siyayiva nakwi "Metal Slug", "Iplanethi elahlekileyo", "iScarface" kunye ne "Lego Star Wars".
54. Sesiphi esona sixhobo sinamandla kumdlalo we "American McGee's, Bad Day LA"? Isikhonkwane seenzipho.
55. E-Japan, ngo-2007 imidlalo emi-4 yakhutshelwa i-Dreamcast.
56. USteve Downes, indoda ekhwaza i-Master Chief, ngu-DJ kwisikhululo sikanomathotholo eChicago.
57. Kumdlalo kaCapcom 'iShadow yaseRoma', kukho ibhonasi, ebizwa ngokuba 'yiNgxaki yoMchamo', yokuhlasela umntu osandula ukuphulukana nolawulo lwesinyi sakhe (ndiyidlalile, kumnandi kakhulu).
58. Kukho umdlalo obizwa ngokuba yi "Communist Mutants from Space". Yinto ye-2600 Atari 1982 "abahlaseli bendawo".
59. UJohn Carmack, "Umgwebo" we-guru-programmer, ungumsebenzi wevolontiya e-Armadillo Aerospace, inkampani yaseTexas ezinikele kwi-orbital space flight.
60. Iqela elinoxanduva lokuhambisa "uMhlali oBi 2" ukuya kwi-N64, ngoku yiRockstar San Diego (ababhali be- "Red Dead Revolver", "Club yasebusuku" kunye ne "Table tennis"
61. "INintendo" iguqulela "ukushiya ithamsanqa ezulwini", into efana "nokushiya ithamsanqa iparadesi" okanye "ube nethamsanqa lokushiya iparadesi."
62. "Final Fantasy" yathiywa igama lokuba umyili wesikwere nomseki, u-Hironobu Sakaguchi, wasebenzisa oovimba bokugqibela benkampani ukuyenza.
63. UTerry Butcher, umphathi wangoku weBrentford FC, wenza intetho yokuvula ye "Pro Evolution Soccer" ngo-2001.
64. Ngaxeshanye nokuphuhliswa kwe "Full Spectrum Warrior" ngu Pandemic, inguqulelo ethe xhaxhe ngakumbi, nesicwangciso esiliqili, esaziwa njenge "Full Spectrum Command" senzelwe umkhosi, kwaye asikaze siboniswe eluntwini.
65. Ukusukela namhlanje (2007), ama-24% abantu baseMelika abangaphezulu kweminyaka engama-50 badlala imidlalo yevidiyo, xa kuthelekiswa ne-9% ngo-1999.
66. Ekupheleni kuka-2005, uSony waqesha amagcisa e-graffiti kwizixeko ezisi-7 zase-USA, ukuze babhengeze iPSP, bagqiba kwelokuba bamangalelwe ngokumasikizi, kwaye 'bayeke kwaye bayeke'.
67. Amagama eengoma kumdlalo wePSP, "uLoco Roco", abhalwe ngabom engacacanga, ngenxa yoko ebengenakufumaneka, kwaye ebeya kuvakala ngokufanayo kwihlabathi liphela.
68. ICapcom imfutshane 'kwiCapsule Computers'.
69. Nangona ungasokuze ubabone, uYoshi unamazinyo.
70. E-UK, "uRayman" ngowona mdlalo uthengisa kakhulu wePSX ngalo lonke ixesha.
71. "I-Splinter Cell: Chaos Theory" yayiyekisiwe eMzantsi Korea, kuba yayiqulethe ukutshatyalaliswa kweSeoul, ikomkhulu layo. Ukuvalwa komsebenzi kuye kwasuswa ekupheleni kuka-2006.
72. "Resident Evil Zero" kuphela kwe-Saga ye-RE, ehlala ikhetheke kwifomathi enye, i-Gamecube.
73. 'J Allard', ligama likaJ Allard. Yatshintshwa ukusuka ku _James Allard.
74. "IiPsychonauts" zikwazile ukuthengisa iikopi ezingaphantsi kwama-90 amawaka phakathi kwePS2, Xbox kunye nePC.
75. Zonke iinjuba eziphetheyo ku "Killer 7" zithiywe ngegama lomntu obhinqileyo ovela kwiimovie zikaJames Bond.
76. "I-Saints Row" ye-Xbox 360 ineengoma ezingaphezulu kwe-130 ezinelayisensi, ezingama-40 zazo ngumculo weklasikhi.
77. Ukuba nomdlalo wevidiyo "Manhunt" eNew Zealand lulwaphulo-mthetho (kulungile ukuba nobundlobongela kodwa).
78. Kwi-E3 2004, phantse imidlalo engama-5000 1000 yaboniswa. I-16 yazo yayintsha kraca, ngelixa i-XNUMX% yemidlalo yahlelwa 'njengemfundo'.
79. Inye yeemoto ezingaphezu kwama-700 kwi "Gran Turismo 4" ithatha abayili ngenyanga ukuyila.
80. Kumiliselo lwaseMelika lomdlalo weboyboy, "Final Fantasy ¨Legend II", ukucinywa kukaNintendo kwanyanzeleka ukuba ajike iqela labarhwebi be-opium, kwiqela labathengisi beebhanana.
81. I-Chain Chomp evela kwimidlalo kaMario isekwe kwinja evela kubumelwane bukaMiyamoto ebesoloko ibotshelelwe emthini.
82. UJohn Romero wathengisa iFerrari yakhe kwi-eBay ngo-2002. Yayinokulungiswa okuvumela ukuba injini ilungiselelwe ilaptop.
83. UTom Clancy ekuqaleni wayikhaba ngamehlo into kaSam Fisher enamehlo amathathu kwi "Splinter Cell", ngenxa yokungenakwenzeka ukuba amagogo ayekwazi ukubona umbono wobushushu nobusuku.
84. "I-Flatout 2" inezinto ezingaphezulu kwe-5.000 ezinokutshatyalaliswa kwisekethe nganye.
85. Ingoma yesandi yoqobo ye «Okami», ithatha iiCD ezintlanu.
86. Ku "Hitman 2: Silent Assassin", elinye lala manqanaba liqulathe iibhokisi zepitsa ezinombhalo waseDanish oko kuthetha ukuba: I-pizza yokwenyani ene-shit yokwenyani kuyo.
87. Kukhutshwe kuphela iiyunithi ezingama-2000 40 zomdlalo weCapcom "iHulking Steel Battalion" ekhutshiweyo, umdlalo weXbox owawulawulwa ngulawulo lwamaqhosha angama-XNUMX.
88. I-Xbox ekuqaleni yayizakubizwa ngokuba yi-DirextX-box.
89. I-comic ye "Killzone" yayizakwenziwa, kodwa umpapashi wonakala.
90. Uyawukhumbula umthetho we-sieera yombane ka "RE4"? Umyalelo wekatana wawenzelwe "u-Onimusha 3" olinganisa phantse imitha (ye-chichis).
91. Phambi kokusebenzela inkampani, umongameli weNintendo uHiroshi Yamauchi wayeqhuba inkampani yeeteksi kunye neLove Hotel.
92. Iintshaba ezikhawulezisa ngo-1971 "Abahlaseli bendawo" yayiyimpazamo, kodwa yanamathela.
93. Umdlalo weGamecube othengisa kakhulu? "Super Smash Bros. Melee", othengise ngaphezulu nje kwezigidi ezi-6.
94. "I Sims" yahlala iiveki ezingama-82 kwishumi leentengiso zentengiso zePC e-UK.
95. "I-Metropolis Street Racer" yakhutshwa amatyeli ama-3 kwi-Dreamcast, ngenxa yeebugs ezahlukeneyo kumdlalo.
96. Ngexesha lokuyilwa kwe "Forza Motorsport 2," iqela lezobuchule lahlawulisa ama-41 izohlwayo, kwaza kwarhoxiswa neelayisensi ezimbini zokuqhuba.
97. "IiMercenaries" ziqulathe bobabini uHan Solo kunye neIndiana Jones njengabalinganiswa abangavuleki.
98. Ubuso bukaMax Payne buyimodeli emva koSam Lake, obhale iskripthi kunye nebali lomdlalo.
99. "ICO" ekuqaleni yayiluphuhliso lwePSX. Kwakhona, iimpondo zazinjalo
yeYorda, hayi eye-ICO.
100. I-Mega Man iblue ngombulelo kwinto yokuba ukubonakala kokuqala bekukho kwi-NES, enokhetho olunqunyelweyo lwemibala.
101. Owona matshini mkhulu we-Arcade ehlabathini ziimitha ezi-4,11 ubude kwaye unamaqhosha okutyhala njengezitya zelentile, ngaphandle kwescreen seemitha eziyi-1,81. Kuyo ungadlala imidlalo engaphezu kwe-150 eyahlukeneyo, ewe, ukunyuka kwileli.
Ukukhuthaza i-Xbox 102 console e-Australia, u-Microsoft uququzelele eyona mfazwe inkulu ibhaluni yamanzi embalini, esungula ngaphezulu kwe-360. Asazi kakuhle ukuba phakathi kwabathathi-nxaxheba okanye bonke ngokuthe ngqo kwinkampani yaseRedmond.
103. Umdlalo wevidiyo ka-1987 malunga noJack the Ripper yayingumdlalo wokuqala kwimbali ukufumana ireyithingi ezili-18 + ngenxa yemifanekiso yayo enobundlobongela.
104. Owona mdlalo wevidiyo ubiza kakhulu kwimbali ibiyi "GTA IV", ebiza indleko zayo ngaphezulu kwe-100 yezigidi zeedola, okwangoku sele zingaphezulu kokufunyanwa kwakhona. Owona mdlalo ubiza kakhulu ukuphuhlisa imbali yayiyi "Shenmue" yeDreamcast ebiza i-80 yezigidi zeedola, nangona isilele ukubuyisa utyalo-mali.
105. Indlu yokulala enamagumbi amaninzi kwimbali yomdlalo wevidiyo yeyona iboniswe kwi "Castlevania: Symphony of the Night" kaPsx, enamagumbi ali-1890.
106. Elona cutscene lide ukuvela kumdlalo wevidiyo lisuka "kwiMetal Gear Solid" yePsx, livela xa iMetri Gear Rex yoyisiwe, kwaye ihlala nje ingekho ngaphantsi kwemizuzu eli-15 nemizuzwana eli-17. Ekupheleni kolu landelelwano, kunokwenzeka ngakumbi ukuba silibele ukuba umdlalo udlalwe njani.
107. Umdlalo kunye nabalinganiswa abaninzi onokukhetha kubo yi "Lego Star Wars", edibanisa ukuya kuma-96, kodwa ngokwazi ukudibanisa iziqwenga ezahlukileyo kunye namalungu omzimba kunye sinokuba ngaphezulu kwesigidi sabalinganiswa abakhethiweyo.
108. "Umlobi wasesitalatweni 2: Umboniso bhanyabhanya" ngumdlalo wokuqala wevidiyo kwimbali oza kusekelwa kwimuvi ekwasekwe kwimidlalo yevidiyo. Ngokucacileyo ukonakala okuninzi akunakulunga kwaye umdlalo ubunokusilela okuvakalayo kwezorhwebo.
109. "Mntundini Kombat" yayingumdlalo wevidiyo okhokelele ekudalweni kwe-ERSB, umbutho ohlela imidlalo yevidiyo ngokusekwe kwiminyaka yobundlobongela eMelika, nalapho lo mdlalo wevidiyo wawukhona kwiingxoxo zebandla.
110. Umdlalo wevidiyo wokuqala wokudubula kwimbali wadalwa ngo-1961
ibizwa ngokuba yi "Spacewar!" Kwaye kwenziwa ngeeyure ezingama-200 kuphela.
111. Eyokuqala «Isiqingatha soBomi» ngowona mdlalo unikezelwe kakhulu embalini, ufumana amabhaso angaphezulu kwama-90, ukongeza kwizinga le-51 njengo "Owona mdlalo ubalaseleyo kunyaka".
112. Elona xabiso liphezulu kwimbali ngosuku olunye ukusuka kwintengiso yomdlalo wevidiyo yayikukuthengiswa kwe "Halo 3", inyusa i-151 yezigidi zeedola kusuku lokuqala lokukhululwa.
113. Eyona saga inkulu yomdlalo wevidiyo ukuba sibala inani lezavenge ngokungathandabuzekiyo yi "Megaman." Ukusuka kwii-Nes zoqobo ukuza kuthi ga kulo mhla, i-saga inezinto ezingaphezulu kwama-43.
Umdlalo webhola ekhatywayo obalaseleyo kwimbali ngokokulinganiswa komsebenzisi yi "Soccer ekrelekrele", apho umdlalo wayo omangalisayo kunye nomlutha wothusayo kwinqanaba lobuchwephesha bexesha.
115. «UColin Mc Rae: Ukungcola», unenkqubo yesandi ecacileyo, apho banokuxutywa khona, QAPHELA: 1.005.772.154.467.879.035.136 izandi.
116. Zonke iiNipon Airways, inqwelo-moya yaseJapan, ineenqwelomoya ezine ezipeyintwe ngokupheleleyo ngabalinganiswa bePokemon, nkqu nabalindi beenqwelo-moya banxiba iifaskoti zabo.
117. Kumdlalo wokudlala indima wabadlali abaninzi “Everquest 2”, besinokuchwetheza “/ pizza” emva koko sidibanise ngokuthe ngqo kwiPort hut hut yomdlalo, samkele iiodolo zasekhaya. Iluncedo kakhulu kubantu abangafuniyo okanye abangakwaziyo ukuphuma kwaye baneeyure ezingama-32 zokubulala inamba.
118. IYunivesithi yaseWashington yenziwa ngo-1991 "iVirtual Retinal Display", itekhnoloji esebenzisa ii-lasers ezisezantsi ukusibhalela ngokuthe ngqo ulwazi kwi-retina yethu, kwaye iliso lethu liba liliso.
119. Umdlalo wevidiyo kunye nolwandiso oluninzi lokuhamba yi "Armed Assault", enomhlaba womhlaba we-400 square km. Asazi ukuba ukuhamba ngayo kwi-skateboard kuvula ibhaso kumdlalo.
120. Ngokuxhaphaza uthotho lwe-glitches, kunokwenzeka ukuba ugqibe i-N64 "Super Mario 64" ngokuthatha inkwenkwezi enye kwi-120 ekhoyo. Ukudlala ngesiqhelo, udinga ama-70 ubuncinci.
121. URalph Baer wenza iMagnavox Oddysey ngo1972, eyayiza kuba ngumdlalo wokuqala womdlalo kwimbali. Kwiminyaka emithandathu kamva wayeza kudala "uSimon" (1978), eyona nto idumileyo yokudlala kumdlalo we-elektroniki.
122. I- «OXO» (1952), ta-te-ti, ithathwa njengomdlalo wokuqala wevidiyo kunye nemizobo kwimbali ukusukela ukuba imidlalo ekwindlela yokubhaliweyo sele ikhona. Ngaphandle koko, kukho amathandabuzo malunga nokuba yayingowona mdlalo wokuqala na, kuba ilungelo lobunikazi elivela ngo-1947 lichaza umdlalo wokulinganisa imijukujelwa kusetyenziswa ityhubhu ye-cathode ray.
123. "UPacman" wazalwa ngobusuku obunye ukuba umyili wayo, uTohru Iwatani, waya kudla isidlo sangokuhlwa nabahlobo bakhe. Bayalela ipitsa, kunye nembono yomlinganiswa yeza entlokweni yakhe xa wabona inani elalisele xa wayethatha isilayi sokuqala.
124. I-Japan yafumana ubunzima bokunqongophala kweemali ezazisetyenziswa kwiifichines ngokufika "kwabahlaseli bendawo." Ekuqaleni, le meko yaqwalaselwa ngokuhlisa amaxabiso ezinto, kodwa ayonelanga kwaye ekugqibeleni urhulumente kwafuneka angenelele ngokufaka iingqekembe ezingaphezulu.
125. Oyena mdlali ubalaseleyo kwihlabathi lika «Pacman» ubizwa ngokuba nguBilly Mitchel kwaye wafumana amanqaku angama-3.333.360 kumdlalo, efikelela kwinqanaba 255 (inqanaba lesibini ukuya kwelokugqibela) ngobomi bokuqala kunye nokutya ngasinye seziqhamo.
126. Umatshini wokuqala wearcade osebenza ngengqekembe "yiComputer Space," eyasungulwa ngoNovemba 1971 yiNutting Associates. Imali eyenziwe ngabadali bayo, uNolan Bushnell noTed Dabney, babehlala befumana iAtari.
127. "IPolybius" ngowona mdlalo we-arcade ungummangaliso ngalo lonke ixesha kwaye akukho kopi enye yawo iseleyo. Ngokwentsomi, le phazili ebonakala kwiindawo ezimbalwa ePortland, e-Oregon yayililinge ngurhulumente wase-US okwaziyo ukubangela amaphupha amabi kunye nokulahleka kwememori kubadlali.
128. Ayizizo zonke iiFolders Fighters ezilwa imidlalo. "Street Fighter 2010" ngumdlalo wexesha elizayo apho umlinganiswa ophambili ogama linguKevin kufuneka ajongane nezihlwele zezidalwa eziguqukayo. Ukufika kwakhe e-United States nakwicebo leshishini laseCapcom eMelika, igama likaKevin latshintshwa laba nguKen.
129. E-China, abantwana abavunyelwe ukudlala imidlalo yevidiyo kwi-intanethi ngaphezulu kweeyure ezintathu, kulandela iimeko ezininzi zokubhubha emva kwexesha elide lokuba kwikhompyuter okanye ekudlaleni imidlalo yevidiyo. Ndicinga ukuba iya kubangelwa liLizwe leMfazwe.
130. Enye yezona mfihlelo zimangalisayo ze-NES "Super Mario Bros" yile ye-Minus World okanye yeHlabathi -1, ilizwe elinokufikelelwa ngokuwela udonga kwaye lenziwe ngamanzi. Ngaphandle kokuba uMario efikelele esiphelweni, umbhobho uya kumthumela ekuqaleni kunye nexesha awayeshiyeke ngalo, ke ukuba uMario unyathela kwiHlabathi -1, uza kufa.
131. Ukuqala kwinqanaba le-18, iziporho ze "Pacman" ziyeke ukujika zibe luhlaza okwesibhakabhaka kwaye azisakwazi ukudliwa.
132. Imascot yokuqala kaSega yayinguAlex Kidd.
133. "UPacman" waziwa njenge "Puck-man" eJapan, kodwa yayikukungena kwakhe kwimakethi yaseMelika okwakhokelela ekubeni igama lakhe litshintshe ngenxa yokufana kwesiNgesi phakathi kwamagama "uPuck" no "Fuck" (hlanza garchar).
134. Emva kwempumelelo yomdlalo bhanyabhanya "ET," kwenziwa umdlalo wevidiyo owenzelwe iAtari 2600. Babeqinisekile ukuba iyakuba yibhombu kangangokuba benze iicartridge ezininzi kunenani lezinto abazithengisileyo.
Iindlela ezilula nezidikayo ezidityaniswa ne-glitch enkulu kumdlalo kwakuthetha ukuba u-Atari akafumani ndlela yokuphuma kwiikhatriji ezintle zasemzini.
Ngokomxholo wasezidolophini, u-Atari wakhetha ukungcwaba imidlalo ye-ET kwintlango yaseNew Mexico, ukunqanda iindleko eziphezulu zokugcina. Endaweni apho bakholelwa ukuba bangcwatywa khona kukho umqondiso othi: "Nantsi indawo yokuphumla i-ET kunye nosapho."
135. Kwi "Pacman," akukho ndlela yokumisa umdlalo, kodwa kukho indlela yokuthabatha ikhefu. Kukho indawo ngaphakathi kwelabyrinth enokufikelelwa xa kungekho nasinye seziporho ezijikelezileyo kwaye esivumela umdlali ukuba azimele kwindawo apho kungayi kubakho mntu ubabonayo.
136. "UPacman" yayingumdlalo wokuqala wokuba nomlinganiswa.
Umdlalo onqabileyo emhlabeni "yiNintendo World Championship 137" ye-NES, kwaye ziiyunithi ezili-1990 kuphela ezisasazwayo.
138. Uyilo lweZelda Triforce lusekwe kwibhanile yentsapho yaseJapan uHojo.
139. Ummeli waseMelika weCapcom uphawule ukuba kumdlalo wokuGqibela wokugqibela bekungalunganga ukuba abo baphambili kufuneka bajongane namantombazana kumlo. Umyili wemidlalo waseJapan uphendule ukuba akukho mantombazana kulo mdlalo. Xa amaMelika ambuza malunga neTyhefu kunye neRoxy, amaJapan aphendula athi ayingawo amantombazana, ukuba ayengabesini esahlukileyo. Aba "ntombazana" babini babenenwele zabo kwaye benxibe iimpahla benazo zokugqibela.
140. UNintendo wasungula umnqamlezo kwaye isilawuli sokuqala safakwa kuso sasikwiphedi ye-NES. Nangona kunjalo, inkqubo yolawulo efanayo yayiyile ye-Mattel Intellivision, eyayiqukethe i-disc ethi, xa icinezelwe ngomnwe, ikwazi ukwahlula phakathi kweendawo ezili-16 ezahlukeneyo.
141. "Final Fantasy VII" yayingumdlalo owenzelwe iNintendo 64. Nangona kunjalo, isikwere kunye neNintendo babeneengxoxo ngenxa yeekhatriji ezisetyenziswa yi-64-bit console, kuba babenomda kubungakanani bemidlalo. Isikwere, siyathuthunjiswa, ekugqibeleni siyakuyikhupha eyokuGqibela yokuCinga ngePlaystation kwii-3 cds.
142. Ekuqaleni uLara Croft wayeyindoda.
143. Amandla e-ps3 avumela ukuba isetyenziswe ekuphandeni izifo.
144. Kwi «Duck hunt» kukho umzuzu apho ungasenakudlala kwakhona kwaye inja ime embindini wesikrini ihlekisa ngathi, engenakubulawa nangona idutyuliwe.
145. Kumdlalo wevidiyo weSuper Nintendo "uChrono Trigger" umlinganiswa uvela esebenzisa umlingo ongahambelaniyo naye. Ubonwa ephosa umlilo xa into yakhe kumdlalo ingamanzi.
146. Amafu namatyholo oqobo "uMario" ayenjalo kodwa enemibala eyahlukeneyo. Kukwanjalo ke nangeentshaba zeentshaba kunye neposta yamakhowa.
147. Kwi «Asassin's creed» kukho ikhabhathi yeplanga efana neOptimus Prime evela kwi «Transformers».
148. Ku "Zelda: i-occarina yexesha" xa ikhonkco lidibana nenkosazana ungayibona efestileni imifanekiso kaBowser, uLuigi, inkosazana kunye nabanye abalinganiswa abavela ku "Mario 64".
149. Kumlo "wokugqibela wokulwa" kwisigaba sokuqala eHong Kong, uChun Li ovela "kulwelwa ezitalatweni" unokubonwa ngasemva esitya kwindawo yokutyela.
150. UMegaman ekuqaleni wayeza kubiza "Indoda yomnyama" ngenxa yesakhono sakhe sokutshintsha umbala ngesakhono ngasinye, kodwa ngethamsanqa kwakusele kukho iqhawe elinelo gama.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » Iividiyo ezili-150 zomdlalo wevidiyo mhlawumbi ongazi
Ungawudibanisa njani umculo kwi-Intanethi ngaphandle kokuba yingcali ye-DJ
Uhlala udlala njani iividiyo zeYouTube